काठमाडौंका ठूला अस्पतालमै छैनन् कोरोना संक्रमितलाई बेड :: Setopati
काठमाडौंका ठूला अस्पतालमै छैनन् कोरोना संक्रमितलाई बेड
विवेक राई काठमाडौं, कात्तिक २
काठमाडौंको महाराजगंजस्थित टिचिङ अस्पतालमा अब एक जना कोरोना संक्रमितलाई पनि भर्ना गर्ने ठाउँ छैन। झन्डै सय जना संक्रमितलाई उपचार गर्ने क्षमता भएको उक्त अस्पतालमा अहिले १ सय ५ जना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ।
अस्पतालका कोभिड फोकल पर्सन डा. सविन थपलिया भन्छन्, 'अब संक्रमितलाई भर्ना गर्न बेड खाली छैन। शंकास्पद व्यक्तिलाई राख्न बनाइएको पाँच वटा बेडमा पनि पोजेटिभलाई नै राखिएको छ।'
उनले अस्पतालको आइसियूसमेत भरिएको जनाए।
'आइसियूमा १७ जना र भेन्टिलेटरमा ३ जना हुनुहुन्छ। त्यसैले बेड खाली छैन,' थपलियाले भने।
नयाँ संक्रमितहरूलाई भर्ना गर्ने ठाउँ नभएपछि अस्पतालले अहिले उपचाररत संक्रमितको अवस्था हेरी घर पठाएर नयाँ संक्रमितलाई भर्ना गर्न ठाउँ खाली गराउन खोजिरहेको छ।
उनले भने, 'अलिक सुधार भएका संक्रमितहरूलाई घर पठाउन सकिन्छ कि भनेर डाक्टर राउन्डमा जानुभएको छ। त्यसैले केहीलाई डिस्चार्ज गर्यौं भनेमात्र बेड खाली हुन्छ।'
कतिपय व्यक्तिले फोनबाटै बेड खाली छ भनेर सोध्ने गरे पनि अहिले बेड खाली नभएको उनले बताए। त्यस्तै उपत्यका बाहिरबाट सिधै अस्पताल ल्याइएका संक्रमितहरूलाई भने इमर्जेन्सीमै राखेर अक्सिजन दिने गरिएको थपलियाले जनाए।
'उपत्यका बाहिरबाट कुनै संक्रमितलाई सिधै अस्पताल ल्याइन्छ। त्यस्तो अवस्थामा इमर्जेन्सीमै अक्सिजन दिएर राख्छौं र मन्त्रालयमा फोन गरेर खबर गर्छौं,' उनले भने।
त्यसरी विभिन्न अस्पतालहरूले संक्रमितलाई भर्ना गर्न नसकिएको खबर गरेपछि मन्त्रालयले कुनै अस्पतालमा बेड खाली छ कि भनेर समन्वय गर्ने गरेको छ। तर पछिल्लो समय सबैजसो अस्पतालहरूको बेड भरिएपछि मन्त्रालयलाई समेत बेड व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे परेको छ।
अहिले अस्पतालमा संक्रमितहरूलाई व्यवस्थापन गर्न नै मुख्य चुनौती रहेको डा. थापलिया बताउँछन्। उनले पहिलेजस्तो संक्रमितलाई तत्काल बेडमा राखेर उपचार गरिहाल्न सक्ने अवस्था नरहेको जनाए।
'अहिले मुख्य भनेको सिकिस्त बिरामी आउँदा पनि पहिलेजस्तो तत्काल बेडमा राखेर उपचार गरिहाल्ने अवस्था छैन,' उनले भने।
राजधानीको मुटुमै रहेको वीर अस्पतालको हालत पनि उस्तै छ। अस्पतालका अनुसार अब जम्मा पाँच जना संक्रमितलाई जनरल वार्डमा भर्ना गर्न सकिने अवस्था छ। कुल १ सय ४० जना संक्रमितलाई भर्ना गर्ने क्षमता रहेको अस्पतालमा १ सय ३० जना संक्रमित उपचाररत् छन्।
अस्पतालका कोभिड फोकल पर्सन डा. अच्युतराज कार्की भन्छन्, 'बिहानसम्म १० वटा जनरल बेड खाली थियो। अहिले भने पाँच जनालाई भर्ना गर्ने ठाउँ होला कि।'
उनले अस्पतालको १० वटा आइसियू पनि भरिएको जनाए। जसमा दुई जना संक्रमित भने भेन्टिलेटरमा उपचाररत् रहेको उनले बताए।
डा. कार्कीले जनरल बेडमा धेरै समस्या नरहे पनि आइसियूमा भने संक्रमितलाई भर्ना गर्न नसकिएको बताए। आइसियूमा राख्नुपर्ने संक्रमित आए इमर्जेन्सीमै होल्ड गरिने र माथि खालि भएको अवस्थामा मात्र आइसियूमा सिफ्ट गरिने उनले जानकारी दिए।
'आइसियूको लागि गाह्रो छ। मन्त्रालयबाट फोन गरेर बेड सोध्नुहुन्छ तर बेड खाली छैन,' उनले भने।
अस्पतालले आइसियू नभए पनि जनरल बेड भने विस्तार गर्ने काम गरिरहेको छ। सरकारले वीर अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाउने निर्णय गरेसँगै अस्पतालले तीन सय संक्रमितलाई उपचार गर्ने गरी क्षमता निर्माण गरिने जनाएको थियो। तर हाल अस्पतालमा १ सय ४० जना संक्रमितको मात्र उपचार गर्ने क्षमता छ।
डा. कार्कीले भने, 'जनरल बेड विस्तार गर्ने काम भइरहेको छ। दुई तीन वटा ठाउँहरूमा बेड विस्तार गर्ने काम भइरहेको छ। अलिकति ट्वाइलेट र बाथरूमको समस्या भएर समय लाग्ने भएको हो। अर्को दुई साताभित्र थप ५० बेड व्यवस्थापन गर्छौं।'
पछिल्लो समय दिनकै हजारौं संक्रमितहरू थपिएपछि अधिकांश अस्पतालहरू भरिएका छन्। सरकारले ठूला अस्पतालहरूका बेडसमेत भरिन थालेपछि आइसोलेसन सेन्टरहरूलाई समेत कोभिड अस्पताल बनाएको छ।
यसरी आइसोलेसन सेन्टरबाट कोभिड अस्पताल बनाइएका अस्पतालहरूमा कीर्तिपुरस्थित राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्र र दहचोकस्थित मनमोहन शिक्षण अस्पताल छन्। यी कोभिड अस्पतालहरूमा लक्षणसहितका संक्रमितहरूको समेत उपचार गर्न सुरू गरिएको छ।
साथै स्वास्थ्य मन्त्रालयले काठमाडौंमा संक्रमितहरूको उपचारका लागि अस्पतालहरूमा बेड अभाव हुन थालेपछि सबै सरकारी अस्पताललाई कोभिड अस्पताल तोकेको छ। अब उपत्यकाका सबै ठूला-साना अस्पतालहरूले संक्रमितको उपचार गर्नुपर्ने छ।
उपत्यकामा जेनेरल बेडको व्यवस्थापन भइरहेको भए पनि आइसियूको व्यवस्थापनमा भने चरम कठिनाइ आइपरेको छ। सरकारी र निजी दुबै अस्पतालहरूमा अहिले संक्रमितहरूलाई आइसियूमा भर्ना गर्न सकिएको छैन। अस्पतालहरूमा आइसियू बेड पाउन भनसुन नै गर्नुपर्ने सर्वसाधरणहरूबाट गुनासो आइरहेको छ।
सरकारले भने पछिल्लो समय उपत्यकामा भइरहेको आइसियू अभावलाई केही सहज बनाउन बाहिर रहेका तर सञ्चालनमा नरहेका आइसियूहरू ल्याउन लागिएको बताएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले उपत्याका बाहिर सञ्चालनमा नरहेका आइसियू तथा भेन्टिलेटरहरू काठमाडौंको अस्पतालहरूमा ल्याएर सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको जनाए।
उनले त्यसका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागले काम गरिरहेको पनि बताए। साथै १ सय ३० वटा भन्दा बढी आइसियू खरिदको प्रक्रियामा समेत रहेको उनले जनाए।
प्रकाशित मिति: आइतबार, कात्तिक २, २०७७, ०६:५३:००
बाढीपहिरो अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ३१ पुग्यो, ४३ सम्पर्कविहीन
बझाङको पहिरोमा बेपत्ता २३ जनाको उद्धारका लागि पठाइयो हेलिकप्टर
कालिकोटमा बाढीले बगायो भेडाबाख्रा
बझाङमा सेतीले बगायो पुल